Home Wararka (Deg Deg) Ciidamo tiro badan oo Baydhabo lagu daadiyay & Isgaarsiinta oo...
(Deg Deg) Ciidamo tiro badan oo Baydhabo lagu daadiyay & Isgaarsiinta oo laga jaray
Waxaa wali soconaya banaanbaxyadii saaka ka bilowday magaalada Baydhabo oo galay maalintii seddexaad, iyadoo dadka ay wali ka careysan yihiin xarigii Mukhtaar Roobow.
Dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa maanta ka duwan sidey ahaayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay, maadaama ay dhagxaan la dhici jireen goobaha Ganacsiga ee ku yaala magaalada Baydhabo.
Wariyaha MOL ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dadka ay banaanbaxyadooda si nabdoon maanta ku dhiganayaan, laakiin waxaa hawada laga saaray isgaarsiinta Teleefanada.
Ciidamo boolis iyo kuwo meletari ah ayaa lagu daadiyay magaalada si ay kaga hortagaan inay dhibaatooyin geystaan dadka shacabka ah ee banaanbaxyada dhigaya.
Ilaa maalintii Khamiista oo lasoo xiray Rooboow oo iminka Muqdisho Maxbuus ku ah ayaa waxaa Baydhabo gilgilay banaanbaxyo rabshado wato, waxaana ku geeriyooday dad badan oo uu xildhibaan Koonfur Galbeed kamid ahaa.
Previous articleDEG DEG; Banaanbaxyo rabshado wato oo markale ka bilawday Magaalada Baydhabo
Next articleSharif Sheekhuna Maye “Dadka ka danbeeya dibad baxyada gacan bir ah ayaan ku qabaneynaa”